ပိုကျဆံမကုနျပဲ ကိုယျတိုငျလုပျနိုငျတဲ့ ပေါငျးသတျဆေးလုပျနညျး – Daily Feed MM
Admin_John | June 27, 2020 | Knowledge | No Comments
ပေါငျးတှကေ တျောတျောဒုက်ခပေးတာ။ မိုးလေးတဈပွိုကျနှဈပွိုကျ ရှာလိုကျတာနဲ့ နှုတျထားတာကနေ ပိုပှားနသေလိုပဲ။ တကတညျး…မစားရတဲ့ အပငျက တျောတျောလညျး သနျပတောကိုး။ပေါငျးသတျဆေးဝယျသုံးရငျလညျး အနံ့
က မသကျသာဘူး။ ပတျဝနျးကငျြကိုလညျး ထိခိုကျမှာစိုးရတယျ။ အိမျက အဘှားကွီးက ကွပျတတျတာနဲ့ အငျး……မဖွဈခဘြေူး။ပွဿနာကတော့ တကျနပွေီဆိုတဲ့ လူတှအေတှကျပဲဖွဈဖွဈ။ တဈနိုငျတဈပိုငျလေး စိုကျနေ
ပြိုးနကွေတဲ့ သူတှအေတှကျ ကိုယျ့ခွံလေး ပေါငျးလေးတှေ သကျသာပါစရေဲ့လို့ ဆိုရငျတော့ လိုကျပွီးသုံးနိုငျဖို့ နညျးလမျး (၂) ခုကို ပွောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ပထမတဈခုကတော့ ရှာလကာရညျနဲ့ ဆားပါ။အိမျမှာသုံးနတေဲ့ ရှာလ
ကာရညျက ရသေနျ့ဘူး တဈဘူးဆို ၂၀၀ ပဲရှိပါတယျ။ နောကျ ဆားတဈထုပျ ကို (၂၀၀) ပဲထား၊ နောကျတော့ ပနျးကနျဆေးတဲ့ဆပျပွာအဆီ နညျးနညျးလောကျ ညှဈခဖြို့ပဲလိုတော့တာ။ ကုနျကစြရိတျကလညျး သိပျမမြားပါဘူး။
ရှာလကာရညျနဲ့ ဆားကို ဆတူ၊ ရှာလကာရညျ တဈခှကျဆို ဆားလညျးတဈခှကျဆိုပွီး ရောတဲ့ အခြိုးအဆလညျး ရှိသလို၊ ရှာလကာရညျတဈပုလငျးမှ ဆား (၅) ဇှနျးလောကျထညျ့တဲ့ ရောစပျနညျးလညျး အလုပျဖွဈပါတယျ။
ရောစပျပွီးရငျတော့ အပငျမှာ ဆေးကုပျတှယျတာမွဲအောငျ ပနျးကနျဆေးဆပျပွာဆီလေး နညျးနညျးညှဈထညျ့လိုကျပွီး ပေါငျးမွကျတှကေို လိုကျဖွနျးပေး လိုကျရငျ ရကျတော့ နညျးနညျးစောငျ့ရမယျ။ တဈဖွညျးဖွညျးခငျြး သသှေားမှာ
ပါ။ သတိထားရမှာတဈခုကတော့ ရှာလကာရညျကွောငျ့ အသားကို နညျးနညျးနီစေ ရဲစတေတျတာပါ။ ပွီးတော့ ဆားမြားမြားသုံးတယျဆိုရငျ အပငျပေါကျဖို့ သိပျမလှယျပါဘူး။ ကိုယျက ပေါငျးတှကေိုသတျပွီး အပငျစိုကျဖို့ သုံးတယျ
ဆိုရငျတော့ ဆားကို လြော့ထညျ့သငျ့ပါတယျ။ တိယနညျးကတော့ ဂငျြးနဲ့ လုပျတဲ့နညျးပါ။ ဂငျြးရယျ၊ ရှာလကာရညျရယျ၊ နောကျတော့ ဆပျပွာဆီနညျးနညျးရယျ။ သူကတြော့ အခြိုးက ဂငျြး (၁၀) သားဆို၊ ဆားလညျး (၁၀)
သားပဲ၊ ဆပျပွာထညျ့ရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ ဆေးတှကေပျတာမွဲအောငျလို့ ထညျ့တာပဲ၊
ဆိုတော့ကာ မြားမြားထညျ့ရငျ မြားမြားပိုကပျနိုငျမယျပေါ့။ သတိထားရမှာကတော့ ကိုယျစိုကျထားတဲ့အပငျတှကေို မထိမိစဖေို့ပါပဲ။ တတျနိုငျသလောကျ မွကွေီးကိုမထိစပေဲ အပငျတှကေိုပဲ ဖွနျးပေးပါ။ အိမျသုံးအတှကျ ရညျရှယျတာမို့
ဒီအခကျြကိုတော့ လိုကျနာနိုငျလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။ တကယျလို့ အဲ့မွကွေီးမှာပါ ဘာအပငျမှ မပေါကျစခေငျြတော့ဘူးလို့ ရညျရှယျရငျတော့ ပုံးလိုကျလောငျးလညျး အဆငျပွပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စိုကျပြိုးရတဲ့မွလေေးဖွဈဖို့ကတော့
တျောတေျာ့ကို ခကျခဲတာပါ။ကဲနောကျနညျးလမျးလေး သှားကွစို့ရဲ့ဆားခညျြးပဲသုံးတာ။ ဆားကွမျးပကျထားပေးရငျလညျး အပငျတှကေို သစေနေိုငျပါတယျနျော။ ဒါပမေဲ့ အဲ့နညျးလမျးအတိုငျးတော့ ဟုတျပါရဲ့။ ဆားတှအေမြားကွီး သုံး
ဖွဈလိုကျတယျဆိုရငျ ဆားပေါကျတဲ့မွဖွေဈပွီး စိုကျပြိုးလို့ရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ကဲဗြာ မွကေို မထိခိုကျစတေဲ့ အကောငျးဆုံးနညျးကတော့ ရနှေေးလောငျးတာပဲဖွဈပါတယျ။ ပွုတျလိုကျတာပေါ့။ အိမျသုံးမို့လို့လညျး ရနှေေးလောငျးနိုငျ
တာပါ။ ဒါဆို စိုကျခငျးတှမှော သုံးနတေဲ့ မိုးကာအုပျပဈတာရောဆိုတော့??? ရတာပေါ့။ အဲ့လိုနညျးနဲ့လညျး ပေါငျးမွကျတှကေို သစေနေိုငျပါတယျနျော။အိမျတိုငျး အိမျတိုငျး ပနျးပငျလေးတှစေီစီရီရီ စိုကျခငျးလေးတှကေိုယျစီနဲ့ လှနိုငျ
ပေါင်းတွေက တော်တော်ဒုက္ခပေးတာ။ မိုးလေးတစ်ပြိုက်နှစ်ပြိုက် ရွာလိုက်တာနဲ့ နှုတ်ထားတာကနေ ပိုပွားနေသလိုပဲ။ တကတည်း…မစားရတဲ့ အပင်က တော်တော်လည်း သန်ပေတာကိုး။ပေါင်းသတ်ဆေးဝယ်သုံးရင်လည်း အနံ့
က မသက်သာဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်မှာစိုးရတယ်။ အိမ်က အဘွားကြီးက ကြပ်တတ်တာနဲ့ အင်း……မဖြစ်ချေဘူး။ပြဿနာကတော့ တက်နေပြီဆိုတဲ့ လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လေး စိုက်နေ
ပျိုးနေကြတဲ့ သူတွေအတွက် ကိုယ့်ခြံလေး ပေါင်းလေးတွေ သက်သာပါစေရဲ့လို့ ဆိုရင်တော့ လိုက်ပြီးသုံးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၂) ခုကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ပထမတစ်ခုကတော့ ရှာလကာရည်နဲ့ ဆားပါ။အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ ရှာလ
ကာရည်က ရေသန့်ဘူး တစ်ဘူးဆို ၂၀၀ ပဲရှိပါတယ်။ နောက် ဆားတစ်ထုပ် ကို (၂၀၀) ပဲထား၊ နောက်တော့ ပန်းကန်ဆေးတဲ့ဆပ်ပြာအဆီ နည်းနည်းလောက် ညှစ်ချဖို့ပဲလိုတော့တာ။ ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း သိပ်မများပါဘူး။
ရှာလကာရည်နဲ့ ဆားကို ဆတူ၊ ရှာလကာရည် တစ်ခွက်ဆို ဆားလည်းတစ်ခွက်ဆိုပြီး ရောတဲ့ အချိုးအဆလည်း ရှိသလို၊ ရှာလကာရည်တစ်ပုလင်းမှ ဆား (၅) ဇွန်းလောက်ထည့်တဲ့ ရောစပ်နည်းလည်း အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရောစပ်ပြီးရင်တော့ အပင်မှာ ဆေးကုပ်တွယ်တာမြဲအောင် ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာဆီလေး နည်းနည်းညှစ်ထည့်လိုက်ပြီး ပေါင်းမြက်တွေကို လိုက်ဖြန်းပေး လိုက်ရင် ရက်တော့ နည်းနည်းစောင့်ရမယ်။ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း သေသွားမှာ
ပါ။ သတိထားရမှာတစ်ခုကတော့ ရှာလကာရည်ကြောင့် အသားကို နည်းနည်းနီစေ ရဲစေတတ်တာပါ။ ပြီးတော့ ဆားများများသုံးတယ်ဆိုရင် အပင်ပေါက်ဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ်က ပေါင်းတွေကိုသတ်ပြီး အပင်စိုက်ဖို့ သုံးတယ်
ဆိုရင်တော့ ဆားကို လျော့ထည့်သင့်ပါတယ်။ တိယနည်းကတော့ ဂျင်းနဲ့ လုပ်တဲ့နည်းပါ။ ဂျင်းရယ်၊ ရှာလကာရည်ရယ်၊ နောက်တော့ ဆပ်ပြာဆီနည်းနည်းရယ်။ သူကျတော့ အချိုးက ဂျင်း (၁၀) သားဆို၊ ဆားလည်း (၁၀)
သားပဲ၊ ဆပ်ပြာထည့်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဆေးတွေကပ်တာမြဲအောင်လို့ ထည့်တာပဲ၊
ဆိုတော့ကာ များများထည့်ရင် များများပိုကပ်နိုင်မယ်ပေါ့။ သတိထားရမှာကတော့ ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကို မထိမိစေဖို့ပါပဲ။ တတ်နိုင်သလောက် မြေကြီးကိုမထိစေပဲ အပင်တွေကိုပဲ ဖြန်းပေးပါ။ အိမ်သုံးအတွက် ရည်ရွယ်တာမို့
ဒီအချက်ကိုတော့ လိုက်နာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့မြေကြီးမှာပါ ဘာအပင်မှ မပေါက်စေချင်တော့ဘူးလို့ ရည်ရွယ်ရင်တော့ ပုံးလိုက်လောင်းလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိုက်ပျိုးရတဲ့မြေလေးဖြစ်ဖို့ကတော့
တော်တော့်ကို ခက်ခဲတာပါ။ကဲနောက်နည်းလမ်းလေး သွားကြစို့ရဲ့ဆားချည်းပဲသုံးတာ။ ဆားကြမ်းပက်ထားပေးရင်လည်း အပင်တွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းတော့ ဟုတ်ပါရဲ့။ ဆားတွေအများကြီး သုံး
ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဆားပေါက်တဲ့မြေဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးလို့ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ကဲဗျာ မြေကို မထိခိုက်စေတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ ရေနွေးလောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြုတ်လိုက်တာပေါ့။ အိမ်သုံးမို့လို့လည်း ရေနွေးလောင်းနိုင်
တာပါ။ ဒါဆို စိုက်ခင်းတွေမှာ သုံးနေတဲ့ မိုးကာအုပ်ပစ်တာရောဆိုတော့??? ရတာပေါ့။ အဲ့လိုနည်းနဲ့လည်း ပေါင်းမြက်တွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်နော်။အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း ပန်းပင်လေးတွေစီစီရီရီ စိုက်ခင်းလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ လှနိုင်